kunjalo, yeyiphi indlela yothutho eyiyeyona kakhulu? at Gcina A Isitimela, Thina ke abathatha bacinga ukuba uhambo Uloliwe yeyona ngomkhulu uhlobo zokuhamba! Funda apha ngezantsi ukuze ufumane okungcono kwaye masitshone kwiposti yethu xa sihamba ngololiwe xa kuthelekiswa nokuhamba ngenqwelomoya.
Ukuhamba ngenqwelomoya ngoku kwamkelwe njengeyona galelo likhula ngokukhawuleza kubushushu behlabathi. Ukuphepha moya xa kukho lula ezinye ukuba bahambe yiyona nto inkulu eyodwa ukuba nawuphi na umntu angenza ntoni ukunciphisa impembelelo yabo yekhabhoni. Ungcoliseko lomoya yehliswe kakhulu ngokuthatha ngololiwe phezu moya. Kuninzi lwamazwe aseYurophu, uthungelwano lukaloliwe ezinkulu kunye neenkonzo rhoqo, ukuze ube eco-friendly abahamba ngaphandle umbingelelo.
Ukuthamba kokuhamba ngololiwe xa kuthelekiswa nokuhamba ngenqwelomoya
Khawube nomfanekiso ukuthatha uhambo nokungabi ukufika iiyure ezimbini ekuseni, ulinde emgceni yokhuseleko elide, isilinganiso ngaphandle ulwelo yakho gel, okanye uthathe Khulula iimbadada zakho ukuze ihlolwe. Wamkelekile ihlabathi yokuhamba kaloliwe. Xa abahamba ngomoya, ngaphezulu amanyathelo ixesha nokhuseleko iyafuneka. Ukuhamba ngololiwe ngokuqhelekileyo kuthetha ungakwazi ukufika 30 imizuzu ngaphambi kwexesha nihambe ngqo iqonga yakho ngaphandle kobuxhakaxhaka kwaye akukho mfuneko yokuba khangela Iibhegi yakho, ke apha sikunike elinye inqaku lokuhamba ngololiwe xa kuthelekiswa nokuhamba ngenqwelomoya, apho iifomu kaloliwe azuze!
umdla Air kwaziwa ukuba enye fastest iindlela zokufikelela oya kuyo, kunjalo, oku kuthatha kuphela moya ngokwayo ingqalelo. kude njani kwangaphambili yokusabela bakho kufuneka ukufika ukuwela elide lokukhangela-in ne line yokhuseleko? Ukuba ukhangele engxoweni kufuneka ulinde ukuqokelela oku xa ufika-oku kukuchitha ixesha. Ngokungafaniyo moya, kwizikhululo zikaloliwe akukho itshekhi-ukungena okanye imigca zokhuseleko, ngoko ke akukho mfuneko yokuba ube kwi iiyure kwisikhululo phambi kwakho uhambo. kakhulu kwizikhululo zikaloliwe enkulu elise okulungileyo intliziyo imizi bekhonza. Isikakhulu xa uthatha uloliwe, ufika ngqo kwi oya kuyo. kunjalo, ngokuthatha inqwelo-moya, uchitha iiyure ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelo-moya.
Kule minyaka ilishumi yokugqibela, umdla uloliwe lo eyishiyile ngokuya nomtsalane abahambi abaziqwalaselayo uhlahlo-lwabiwo mali. Nangona ukuthatha indiza oya kuyo isekhona indlela ephumelelayo kufika oya kuyo, kukho iindleko ezongezelelekileyo ukuba uqobo zingakuhoyi ukuthatha ingqalelo. Xa kuqwalaselwa indlela yokuhamba, kufuneka ongezwe kuyo iindleko extra wokufika kwaye ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya. Oku mhlawumbi kuquka iindleko zepetroli kunye yokupaka, okanye ibhasi moya okanye yetekisi. Akukho nanye kuzo sitshiphu.
Ngaphandle kokuba uhlawule i class business, indawo yakho ngokuqhelekileyo ezithintelweyo isihlalo moya. Kuloliwe, ungahambisa ngokukhululeka, kwaye uya kuba legroom ngakumbi malunga izihlalo zakho. Ngexesha indiza yakho, kufuneka ulinde ukuba uphawu isihlalo ibhanti ukucima ukuya kwi isihlalo sakho. kunjalo, kuloliwe uhambisa-ntyala, nomfo ziluma okanye ikofu, kwaye ujonge umhlaba udlula. A train ride bemvelo Usenokude iholide. Uninzi loololiwe baseYurophu bakwanikezela ngeWiFi yasimahla- into engekhe yatsho kubo bonke Airlines.
umdla Isitimela likuvumela ukuba ukuhamba kakuhle ne qabane lakho waqubuda. izilwanyana ezininzi ezingayilungelanga ukuba uhambo ngomoya ngenxa yempilo, ubudala, okanye ukuzala.
yayihamba oololiwe European kungathatha izinja, iikati, kunye nezinye izilwanyana ezincinci nabo kwaye ixesha elininzi ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo!
Ukuthatha zonke ezi zinto zibe ingqalelo, kulula ukubona indlela umdla uloliwe isiba evelele ngokuya namhlanje. Moya zibe lula ukufumana ukuba amazwe weekhilomitha kude. kunjalo, ukuba ujikeleza iYurophu okanye ezinye iindawo ngothutho oluhle kakhulu lukaloliwe, zokuhamba train indlela kakuhle kakhulu kwaye obutofotofo zothutho.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, Landela Gcina uloliwe kuFacebook, Akhawunti Instagram, yaye Twitter Iiakhawunti.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
ukhenketho uyive train Travel